"EE" iyo "OO"
Saturday 9th January 2021 09:50:54 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Labadan qurub waa xidhiidhiyaal. Xidhiidhiyuhu wuxuu ka mid yahay qaybaha hadalka,
waxana ka mid ah "iyo", "ama", "na", "ba" (labadan danbe labada eray ee ay isku xidhayaan bay ka hore ku daba karmaan sida "wuu tegay buuggiiNA wuu qaatay"; "markuu tegay, buuggiiBA wuu illaaway"), iyo kuwo kale. Waxay isku xidhaan erayo weedh ka tirsan, ka dibna waxay ka dhex dhaliyaan micno hor leh oo haddii ay maqan yihiin, ama la isku beddelo, aan meesha yimaaddeen. Qodobkaan u socdaa waa kaa danbee haddii la isku beddelo labadan xidhiidhiye ee kor ku qoran, waxa dhasha micno geddisan, gebi ahaanba.
"Ee" wuxuu xidhiidhiye noqdaa weedha uu ku jiro magac/uyaal qodob wata; halka "oo" uu xidhiidhiye noqonayo marka aanu qodob jirin.
a) Qofka ordaya EE dharka cad (markan qof iyo dharba qodob baa raacay)
b) Ninka dheer EE dhuuban (markan nin keli ah buu qodob raacay)
a) Qof ordaya OO dhar cad (markan qof iyo dharba qodob ma wataan)
b) Nin dheer OO dhuuban (markanna nin qodob ma wato.
Labada tusaale farqiga u dhexeeyaa waa in kuwa 1 la isla garanayo, oo waa qof iyo nin farta la isugu fiiqayo oo cidda ka hadlaysaa ay isla taqaan. Balse tusaalayaasha 2 waa qof iyo nin uun.
Haddaba, haddii la isku beddelo maxaa soo baxaya?
1(a) Qofka ordaya OO dharka cad
2(a) Qof ordaya EE dhar cad.
Haddii la isku taxallujiyo waa laga yaabaa in la fahmo waxa loo jeedo, hasayeeshee naxwe ahaan weedho dhisan ma aha. Waxana keenay keli ah xidhiidhiyihii oo aan meeshiisii joogin.
Magacyada gaarka ah (sida qof/dal/deegaan magacii) waxa loo eegayaa in qodob raacsan yahay iyo in kale. Fiiri tusaalayaashan:
- Deyr OO ordaya ayaa noo yimi.
- Deyrka ordaya EE noo yimi...
Markan waxaynu arkaynaa in magacii gaarka ahaa kolka uu bilaa qodobka yahay uu u baahday xidhiidhiyaha OO, weedha uu ku jirayna ay dhammaystirantay (mid micno leh noqotay). Hasayeeshee marka isla magacii gaarka ahaa qodob qaatay, xidhiidhiyihii EE baa shaqadiisa qabsaday, weedhiina waa qabyo (oo qofka akhrinayaa wuxuu is wayddiinayaa "hee? Deyrka ordaya ee idiin yimi maxaa ku dhacay/muxuu sheegay?")
Tusaalayaasha sare waa weedho fudfudud. Aynu eegno weedhaha kakan.
- Shalay annaga OO iska lugaynayna OO bilaa lacag ah, ayaannu ku soo baxnay Deyr OO mushaharkii soo qaatay.
- Shalay sidaannu isaga lugaynaynay EE bilaa lacagta u ahayn, ayaannu ku soo baxday ninkii Deyr EE mushaharka soo qaatay.
Labadan tusaale maxay ku kala duwan yihiin? Marka hore, magacuyaalka "annaga" oo u taagan magacyada gaarka ah ayaa la raaciyay xidhiidhiyaha OO (wuxuu isku xidhayaa magacuyaalkayaga iyo tilmaamo aannu lahayn shalay); "lacag" maaddaama aanay qodob wadanna xidhiidhiyaha ka horreeyaa OO buu noqday: dabadeed "Deyr" oo magac gaara ah oo aan qodob wadan ayaa isagana OO la raaciyay. Balse tusaalaha danbe, erayga "lacagta" oo qodob wata ayaa keensaday in xidhiidhiyihii EE la raaciyo; ka dibna "ninKII Deyr" oo uu qodob ku jiro ayaa la raaciyay "EE".
Tusaalayaashaa waxa inooga wada cad in labadan xidhiidhiye ay shaqooyin kala duwan afka u hayaan. Waxaanad eegataa, welibaa, in meesha qodob ka dhow yahay iyo in kale. Haddii aanu jirin, OO ka hawlgeli: haddii se aad aragto, ka wareeg oo EE u beddelo.
Waa ufiirfiirsi kooban oo iiga baxay. Wax waa lagu dari karaa.
Nooca Cusub Ee Cudurka Coronavirus Oo Caalamka Ku Sii Fidaya & Walaac Laga Muujiyey.
Burcad-Badeeda Galbeedka Afrika Oo Afduubtay Markab Turkiga Laga Leeyahay.